Horyaalkii 35 aad ee Kubadda Cagta Soomaaliya oo shalay si rasmi ah dib uga bilaabaday Garoonka Banaadir
Sawirada furitanaka horyaalka o dhan
Dr Maxamud Gaabow oo furaya Horyaalkii 35aad
Kubadda Cagta Soomaaliya
Labo Munaasabadood oo mid ay tahay furitaanka Xarunta Dhexe ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya midna ay tahay dhameystirka Horyaalkii 35 aad ee Kubadda Cagta Soomaaliya ee xakadka ku yimid labo sano ka hor ayaa shalay ka kala dhacay Garoonka Kubadda cagta Banaadir Koonis iyo xarunta dhexe ee Xiriirka Soomaaliyed,iyadoo xafladahaas ka soo qeybgaleen Mas’uuliyiin kala duwan oo ka kala socota qeybaha bulshada Soomaaliyed.
Xaflad qado Sharaf ah oo ay sameeyeen Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya oo ka dhacday Hotelka Caalamiga ee Global oo ku dhaw xarunta Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qeybgalay xubnaha Guddiga Olombikada Soomaaliya, Maamulka Gobolka Banaadir iyo Suxufiyiin kala duwan,iyadoo markii Xafladaas dhamaatay loo soo dhaqaaqay xarunta Xiriirka Kubadda Cagta kadibna halkaasi lagu furau Xaruntii Xiriirka Soomaaliyed ee Kubadda Cagta ee Muxyadiin Darbo weyne Madaxda ka yahay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamud Xasan Cali Gaabow ayaa lagu sharfay inuu Albaabada u furo Xarunta Xiriirka Kubadda Cagta, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu isago lagu casuumo furitaanka xaruntan cusub.
Kadib dhamaan Mas’uuliyiintii halkaas isugu timid waxay socod ku tageen Garoonka Waayeelka ah ee Banaadir Konis oo shalay si rasmi ah uga bilaabaday dhameystirka Horyaalkii 35 aad ee Kubadda Cagta Soomaaliya.
Xubno uu ka mid yahay Guddoomiyaha Gobolka, Madaxda xiriirada kala duwan Soomaaliya, Madaxda Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya iyo kumanaan kun oo Soomaaliyed ayaa mar kaliya waxay u istaageen furitaanka ama dhameystirka Horyaalka 35 aad ee Kubadda Cagta Soomaaliya kaas oo muddo 2 sano ka hor hakad galay.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Cadde Gaabow ayaa Kubaddii ugu horeysay Cagtiisa ku riixay isagoo dadka tusay inuu yahay Laaciib ku wanaagsan xirfideynta Kubadda.
Halkaasi waxaa isaga horyimid kooxaha Kubadda Cagta Banaadir iyo Feynuus, labada kooxood waxay soo bandhigeen Ciyaar soo jiidatay dadweynihii ka soo qeybgalay daawashada cayaarta.
Qeybtii hore Ciyaarta waxay ku dhamaatay 0-0 hase ahaate qeybtii dambe Cayaarta markii ay socotay dhawr 20 daqiiqo ayaa kooxda Feynuus waxaa loo dhigay Rigoore waxaase ka cunay Riqooridaas Laaciibkooda ahna Kabtanka Naadigaas Odey.
Guud ahaan Ciyaarta waxay ku dhamaatay 0-0 oo Labada kooxood isla dhaafi waayeen, iyadoo dadweynaha ku dhaqan Gobolka Banaadir soo dhaweeyen furitaanka Horyaalka.
Muxyadiin Xasan Cali (Darbo weyne) Guddoomiyaha xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ayaa shalay waxay u ahayd maalin gaar ah oo taariikhda u gashay kadib isagoo Guddoomiye ah oo furay Hoyraalka Kubadda Cagta Soomaaliya.
Daawashada Cayaartii shalay ayaa sidoo kale waxaa ka soo qeybgalay Agaasimaha Isbitaalka Keysaney Yuusuf Yare, Guddoomiyaha Shirkadda Xawaaladda Global Xusen Goley, Guddoomiye kuxigeenka Xiriirka Kubadda Cagta Saciid Maxamed Nuur (Mugambe) oo shalay ka soo Laabtay safar uu ku tagay dalka Talyaaniga.